EA021 - Mkpu mkpuchi ala ikuku maka ụlọ [Mgbochi Mgbochi nke Agadi] - $ 550 - OMG Solutions
Usoro nlegharị anya nke ala a na - eme ka ndị na - elekọta ya ghara ịbanye na mgbe onye ọrịa hapụrụ ma ọ bụ nwara ịhapụ akwa ha ma ọ bụ ụlọ ha. Ọ na-abịa na akwa na-adịgide adịgide roba ihe mmetụta nwere beveled n'ọnụ na mkpọchi na-eguzogide elu na ala tinyere a ihe mmetụta kọntaktị ihe mmetụta. Oti mkpu nlekọta anyị dị elu dị mfe ịwụnye ma nwee ike ịkwaga iji gboo mkpa na-awagharị awagharị.
Enweghị mkpọtụ n'ime ụlọ! Tinye Quiet Fall nyocha ebe ị chọrọ ya
OMG Iche-ihe nchoputa uko ikuku ihe omuma nke Pad na-eme ka ndi n’ilegharia anya na ihe ndi mmadu bi n’ime ya site n’itinye onye nlere anya daa n’iru mgbe ndi bi n’ime ya biara n’elu ala matara ihe mmetuta. Oti mkpu ga-egosi ihe dịka 1-1 / 2 lbs. nsogbu. Enwere ike iji ya dina n’akụkụ akwa ma ọ bụ n’ọnụ ụzọ.
Ogwe ntanetụ a na-ahụ anya bụ usoro na-agagharị agagharị dị mfe nke na-agụnye sensọ ikuku na-ezigara na-eziga ozi na unit. Iji mee ihe, onye na-elekọta ya na-etinye aka na nlekota ala, nke a na-etinye ya na akwa onye ọrịa ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ nke ebe a na-elekọta ndị nọọsụ nke a chọrọ ka a nyocha.
Ozugbo onye ọrịa na-aga na mbadamba ihe dị mkpa, ọ na-agwa onye na-elekọta ya site na wireless wires. Nke a bụ ihe ngwọta dị oke ọnụ nke zuru okè maka ebe obibi ndị mmadụ ma ọ bụ ebe nchekwa ọ bụla ma ọ bụ ụlọ nkwarụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a dị na ala dị iche iche dị ịzụta tupu eburu ha na pager dị ka ọ dị mkpa. A na-eji nlezianya lelee ọnụ ọgụgụ ụlọ na / ma ọ bụ ndị ọrịa na otu ma ọ bụ otutu pagers. Usoro a nwekwara ike na-arụ ọrụ n'etiti ndị nlekota nke etiti obodo, pagers, ekwe ntị, ime ụlọ ụzọ oku oku mberede, wdg.
EA021 wireless Monitor Monitor mgbe niile na-egosi na a na-enweta mgbaàmà site na akara ihe mmetụta ma na sistemụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ n ’ihe mgbaaka ihe mgbapụta amamịghe ma ọ bụ n’oghere, nyochaa mkpu ma gosi n’ akara ga-efu.
ỌJIR. - Olu olu zuru oke.
Enweghị eriri n'etiti paịlị na nlekota - belata nsogbu ọgịga ma kpochapụ ụdọ.
Egosi ikike nke Patad Pad Signal Lost - na - eme ka onye na - elekọta ya mata ma ọ bụrụ na njikọ n’etiti ihe mmetụta sensọ na onye na - elelee anya ga - akwụ ụgwọ.
Ọnọdụ ịhọrọ: Onye na-elekọta ya nwere mkpịsị ugodi nwere ike ịmalitegharịa onye nrụzi na Patent, Caregiver Key ™ nke Tamperproofs na-enyocha.
Onweghị onye na-enweghị nchedo Gbanyụọ: Nlekọta enweghị ike ichefu ịgbanwuo nyocha
Ejiri akwa akwa ma ọ bụ oche ihe mmetụta oche, wireless ala, na Infrared Motion Sensor na-arụ ọrụ.
Otu a ka ha si arụ ọrụ:
Onye ọrịa na-anwa ịkpa akwa ma ọ bụ ime ụlọ
Oti mkpu na-akpatakarị onye ọrịa gafere mat
Oti mkpu na-aga n'ihu na-ada ụda ruo mgbe onye nlekọta na-anabata ya
Enwere ike ịtọ ya gbachi nkịtị ka ọ daa ụda n'ime ebe dịpụrụ adịpụ
Itinye ya na mpụga mpụga ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ esi esi na kichin, mkpu a na mat duo ga-adọ aka na-elekọta onye na-elekọta ahụ na onye ọrịa ahụ na-anwa ịnweta ohere na mpaghara na-apụghị apụ mgbe ọ na-esoghị. Site na teknụzụ ikuku nka na - eme ka nnwere onwe onye na - elekọta ya gbanwee ebe ọnye mkpu, ma ọ bụrụ na etinyere ya na mgbidi dị nso, ma ọ bụ kpuchie ya na tebụl nso.
Nzuzo 9591 2 Echiche Taa